कांग्रेसमा व्यक्तिकेन्द्रित द्वन्द्व बढ्दै [टिप्पणी]- समाचार - कान्तिपुर समाचार
टासी घले लगभग चार दशकभन्दा बढी समयको नेपाली फुटबलमा कुनै न कुनै भूमिका र पात्रका रुपमा देखा परे । उनीबिना नेपाली फुटबलको एक कालखण्ड अधुरो नै हुन्छ ।
श्रावण १९, २०७७ हिमेश
काठमाडौँ — केही बूढो भएर हो कि अब त टासी घले पनि धेरैका ‘टासी दाइ’ भए । अझ अवतारी टासी रे एक उनले आफ्नो जमानामा फुटबल पनि खेले, गल्फ त अझै खेलिरहेका छन् । तर जतिबेला उनले फुटबलको बल देखेका थिएनन् ।
गल्फ भन्ने खेल हुन्छ भनेर सुनेका पनि थिएनन्, आफ्नो मनाङतिरको गाउँमा सानो छँदा खाली खेलिरहन्थे । उनले खेल्ने खेल अलिकति फुटबल जस्तो थियो, अलिकति क्रिकेट जस्तो पनि थियो ।
आफ्नै गाउँले प्रविधिले बनाएको बललाई पहाडको भित्तामा सकेसम्म जोरले प्रहार गर्थ, सके खुट्टाले नभए लट्ठीले अनि भित्तामा ठोक्किएर आएको बललाई समाउनुपर्थ्यो । यही खेलमा सानो टासीलाई महारथी प्राप्त थियो । त्यसैले त्यति बेलाकै बूढापाका भन्थे रे, यी त अवतारी हुन् खेलका । अझ भनौं खेल्नका लागि फेरि पुनर्जन्म लिएका । नभन्दै टासी दाइले फुटबलको मैदानमा पनि धेरै खेले, गल्फ कोर्समा पनि उत्तिकै समय बिताइसकेका छन् ।
मैदानबाहिरको खेलमा पनि उनी उत्तिकै माहिर छन् । जेहोस्, हालैका कुनै दिन बिहान सबेरै उनी आफ्ना केही पुराना कुरा सुनाउन तयार भए । लगभग चार दशकभन्दा बढी समयको नेपाली फुटबलमा कुनै न कुनै भूमिका र पात्रका रूपमा देखा परे । उनीबिना नेपाली फुटबलको एक कालखण्ड अधुरो नै हुन्छ । अब टासी घले भनेपछि मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबको कुरा आउने नै भयो । खासमा कुरा यसैबारे हो, नेपाली घरेलु फुटबलको सबैभन्दा सफल र लोकप्रिय क्लब कसरी अस्तित्वमा आयो त ?
फेरि बिहानकै कुरा, त्यो पनि पुसको । त्यसमाथि काठमाडौंको जाडो । तर घटना भने आजको होइन, ०३८ सालको । त्यो वर्षको पुसको कुनै बिहान दशरथ रंगशालामा ८ बजे निकै महत्त्वपूर्ण खेल भएको थियो । त्यतिबेला लिगमा पनि फाइनल हुन्थ्यो, त्यो खेल सहिद स्मारक लिग ‘बी’ डिभिजनको फाइनल थियो । खेल थियो, थ्रीस्टारविरुद्ध ठमेल–११ । कुनै न कुनै अवसरमा यो खेलबारे प्रायः चर्चा भइरहन्छ । आखिरमा यो खेलको ऐतिहासिक महत्त्व छ । यो खेल जसले जित्थ्यो, त्यो ‘ए’ डिभिजन पुग्थ्यो । त्यसै बिहानै दशरथ रंगशालाका दर्शकदीर्घा लगभग भरिसकेको थियो । खेल आखिरमा थ्रीस्टारले २–० जित्यो र ‘ए’ डिभिजनमा उक्लिन सफल रह्यो । त्यसयता त थ्रीस्टार त्यहीं छ, सानले । यसबारे थ्रीस्टार र भित्री पाटनका फुटबलप्रेमीले सुनाउने कथा एकथरी छ ।
त्यसअनुसार त्यस खेलमा पवन रानामगर र प्रेमबहादुरले गोल गरेका थिए । अब टासी दाइको मुखबाट सुनेको विवरण यस्तो छ, जुन ठमेल र भित्री काठमाडौंको हो । स्कोरमा कुनै समस्या भएन, खेल थ्रीस्टारले नै जितेको हो । तर त्यो खेल पूरा चलेको थिएन । दोस्रो गोल विवादास्पद रह्यो । खेलका रेफ्री थिए मथुरा श्रेष्ठ । दर्शकदीर्घाबाट बजेको सिठीमा ठमेलका खेलाडी झुक्किए र उनीहरूले आफ्नो पेनाल्टी एरियामा बल रोके । त्यसैमा रेफ्रीले पेनाल्टीको निर्णय दिए र दोस्रो गोल भयो । तर यसलाई ठमेल समर्थकले स्विकार्न सकेनन् र झगडा सुरु भयो । झगडा बढ्दै गयो, दर्शक मैदानमै ओर्लिए, खेल त्यहीं रोकियो । त्यस दिन दशरथ रंगशालामा भएको झगडा निकै डरलाग्दो थियो ।
यस्तो मारामार र काटाकाटको झगडा यसअघि र पछि कहिले पनि भएन होला । झगडा न हो, अहिलेका बूढापाका पाटनतिरका भए भन्छन्, त्यसमा हामीले नै जित्यौं । ठमेलतिरका बूढापाका भन्छन्, होइन झगडामा हामी नै माथि रह्यौं । आखिरमा यस्तो झगडाको नतिजा त हुन्न होला । जेहोस्, त्यो घटनापछि ठमेल कारबाहीमा पर्‍यो, दुईवर्षे प्रतिबन्धको । अझ रेलिगेसनमै पारियो ।
खेलाडीमाथि पनि यस्तै प्रतिबन्धको सजाय सुनाइएको थियो । त्यसको अर्थ टासी दाइ पनि प्रतिबन्धमा परे । त्यो खेल खेल्नेमा भर्खर किशोर उमेर छोएका दुई खेलाडी पनि थिए, पहिलो त मणि शाह भए, अर्को विराटजंग शाह । उनीहरू पनि कारबाहीमा परे । पछि उनीहरू तत्कालीन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव शरदचन्द्र शाहलाई भेटेर क्लब र आफूहरूमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउन अनुरोध गर्न गए । तर कुरा मिलेन । पछि मणिमाथिको प्रतिबन्ध मात्र हट्यो किनभने उनलाई नेपालको उमेर समूहको फुटबलमा खेलाउनु थियो । ठमेल क्लब खासमा त्यहींका भगवान बहालतिरका रैनाथे नेवारले स्थापना गरेका थिए । त्यसले कहिले पनि ‘ए’ डिभिजनमा खेलेन ।
प्रतिबन्ध सकेपछि यसले फेरि ‘बी’ डिभिजन उक्लिन पनि सफल रह्यो । एकपल्ट मनाङ मर्स्याङ्दी र ठमेलकै खेल पनि भएको थियो, ‘बी’ डिभिजनमा । मनाङ मर्स्याङ्दीको स्थापना र उदयपछि त यो सधैंका लागि हरायो । कसरी हरायो, त्यो टासी दाइलाई पनि हेक्का छैन, उनी त खाली भगवान बहालको एउटा औषधि पसल मात्र सम्झन्छन् । खेल सकेपछि खाजा खान त्यहीं जान्थे खेलाडीहरू । जुन दिन दशरथ रंगशालामा त्यो झगडा भएको थियो, त्यतिबेलासम्म मनाङ मर्स्याङ्दीको कुनै अस्तित्व नै थिएन । तर क्लबको बीउ रोप्ने काम भने त्यही बेला भएको थियो भन्दा हुन्छ । त्यसैले त अहिले पनि मनाङ मर्स्याङ्दी र थ्रीस्टारबीच खेल हुनुपर्छ, प्रतिद्वन्द्विता अलि चर्को नै हुन्छ ।
ठमेलमा प्रतिबन्ध लागेपछि पनि टासी र उनका साथीहरूले फुटबल भने खेल्न छाडेनन् । त्यतिबेला बिहान खेलेर खाजा खान ठमेलतिर लाग्थे । यस्तै खाजा गफका क्रममा कुरा निस्क्यो, एउटा फुटबल क्लबको स्थापना गर्ने । ख्याल ख्यालमा निस्केको त्यो कुरामा पछि सबै गम्भीर भए र सुरुमा एउटा विधान नै तयार पार्ने कुरा भयो । यसका लागि केही साथीहरू बागबजारको कुनै ल फर्ममा छिरे र त्यहाँबाट फर्कंदा उनीहरूको हातमा विधान थियो । पछि रानीपोखरीमा रहेको अञ्चलाधीश कार्यालयमा गएर क्लब दर्ता पनि भयो, अध्यक्ष अरू कोही नभएर टासी नै थिए । त्यसपछि त मनाङ मर्स्याङ्दीले ‘डी’ डिभिजनबाट खेल्न थाल्यो । बाँकी त इतिहास नै भयो । मनाङ मर्स्याङ्दीको सुरुआती दिनको इतिहास अझै लेखिएको छैन भन्दा हुन्छ, तर त्यसलाई सुनाउनेहरू अझै हट्टाकट्टा नै छन् । जस्तो, टासी दाइ आफैं । उनलाई पनि अब यसलाई सुनाउने सुर चलेको छ, हामीलाई भने सुन्ने ।
जस्तो एउटा कथा । मनाङ मर्स्याङ्दीले अहिलेको जर्सीको स्वरूप कसरी तयार भयो त ? उनी सुनाउँछन्, ‘हङकङ गएका बेला ‘डी’ डिभिजनमा पहिलोपल्ट लगाएर खेलेको पूरा जर्सी सेट मैले किनेको थिएँ । त्यसमा पुमाको ट्र्याकसुट थियो । सबैका लागि खर्च भएको थियो, जम्मा ४० हजार, जुत्तासम्म पनि गरेर ।’ एउटा जर्सीको सेट आकाशे र सेतो रङको धर्सा धर्सा भएको थियो, उनलाई मन पर्‍यो र किनिहाले ।
गल्फ कोर्समा टासी घले । मनाङ मर्स्याङ्दी खेलाडीलाई जर्सी हस्तान्तरण गर्दै घले । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर
खासमा यो जर्सी कुन क्लबको थियो त ? यसबारे उनलाई पनि राम्रोसँग हेक्का छैन । अनुमान गर्छन्, कुनै उताकै क्लबको हुनुपर्छ, वा कुनै देशको । संयोग कस्तो भने यो जर्सी लगभग अर्जेन्टिनाको जस्तै थियो । जति बेला मनाङ मर्स्याङ्दीको उदय भएको थियो, त्यतिबेलाको समय अर्जेन्टिना र डिएगो म्याराडोनाकै थियो । त्यसैले यसैले निरन्तरता पनि पायो, सबैले मन पनि पराए । यस्ता धेरै कथा छन्, जुन उनी सुनाउन सक्छन्, उनका त्यो बेलाका साथीहरू सुनाउन सक्छन् । उनले वाचा पनि गरेका छन्, सुनाउँछु भनेर ।
यिनै अवतारी टासी दाइ केही समय बिराएर विवादमा फसिरहन्छन् । दोष जसको भए पनि उनको नाम जोडेर थरीथरीका कुरा निस्किरहन्छन् । तर यी सबै एक प्रकारले माफयोग्य छन् किनभने उनले नेपाली फुटबललाई दुई ठूला गुन लगाएका छन्, पहिलो त मनाङ मर्स्याङ्दीको स्थापना गर्नु र त्यसलाई हुर्काउनु । दोस्रो मणि शाहलाई सुरुआती दिनतिर सहयोग गर्नु र यसलाई पछिसम्म पनि जारी राख्नु । अब कसैले नसोधे हुन्छ, मनाङ मर्स्याङ्दी के हो र मणि को हुन् भनेर ।
प्रकाशित : श्रावण १९, २०७७ ०९:५६